ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုအစားအစာနှင့်လိင်ကိစ္စသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သလား။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
Romeo ဂီနီဝက်ကလေး Boom စေတယ်
Sooty ဟုခေါ်သောဂီနီဝက်သည်ဝေလတောင်ပိုင်းရှိသူတို့၏လှောင်အိမ်ထဲသို့လှည့်လည်သွားပြီးနောက်အမျိုးသမီး ၂၄ ယောက်နှင့်အတူစိတ်အားထက်သန်သောတစ်ညတွင်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ Sooty သည် guinea pig အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချင်းစီကတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့ပြီးယခုအခါအသက် ၄၀ အရွယ်ရှိသော Guinea ဝက်မွေးဖွားလာသည်။ ။ ။ ။ "သူကလုံးဝချိုးဖဲ့ခဲ့သည်။ သူ့ကိုသူ့လှောင်အိမ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပြီးသူကနှစ်ရက်အိပ်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါ Coolidge Effect ဇီဝဗေဒသည်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှမမြေသြဇာမဖြည့်ဆည်းရန်ဇီဝဗေဒ၏ပြောင်မြောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ အမျိုးသမီးများတွင်လည်းတွေ့မြင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည် ဝေးလံသောဆွေမျိုးသားချင်းများ: ကြွက်။ ပေမယ့်ကျွန်တော် လူသားမြားသ pair တစုံ bonders များမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bond အစီအစဉ်ကိုနေတုန်းပဲဒီအဟောင်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင် ရှိ-အခွင့်အလမ်း-အလိုတော်-get-It-အပေါ် အရင်းခံတွန်းအား။
အဆိုပါ Coolidge Effect အပါအဝင်အားလုံးတိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်, neurochemicals နှင့် receptors အတွက်အပြောင်းအလဲများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆုံးခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ မကြာမီကသုတေသန Sooty ၏သူရဲကောင်းလုပ်ရပ်နောက်ကွယ်ရှိစက်ပြင်စက်များသည် striatum တွင်လှုပ်နေနိုင်သည် - ရှုပ်ထွေးသောတည်ဆောက်ပုံအုပ်စုများသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်၏ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ striatum ဆုလာဘ်များနှင့်မနှစ်သက်နှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြင်းထန်စွာသြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ လိင်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်နှောင်ကြိုးသည်ဤတည်ဆောက်ပုံများကိုဖြတ်သန်းစေသည်။ သူတို့မလင်းရင် "ဒါကမဖြစ်ဘူး"
ဥပမာအားဖြင့်, အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမကြာခဏ dopamine နှင့်အတူ ဦး နှောက်ရေလွှမ်း။ striatum ရှိအဓိကအာရုံခံဆဲလ်များသည် D2 (dopamine) receptors များစွာကိုပိတ်ပြီးမြင့်မားမှုကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ဦး နှောက်ပြန်လည်မရောက်မချင်းထိုအရာသည်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုခံစားချက်များကိုလျော့ပါးစေသည်။ D2 receptor အနည်းငယ်သာဆိုလိုသည်မှာ“ ငါအဆင်ပြေဖို့ dopamine ပိုလိုအပ်တယ်။ ” ဆုလိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အော်ဟစ်နေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အရာများသာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကျောက် 'n' roll …သို့မဟုတ်Häagen Dazs ။ တကယ်တော့, အားလျော့ကုန်ပြီ dopamine receptors နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများလိင်နှင့်နှောင်ကြိုးအပေါ်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးလေ့; သူတို့ကပိုမိုအားကောင်းတဲ့ကန်ဘောလိုတယ်။ D2 receptors သည်ဘရိတ်များကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းတွင်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ နည်းနည်း D2 receptors မတရားသောခက်ခဲပါစေ ခုခံတွန်းလှန်ရန်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသုတေသနတွင်, Bing လူသားတွေအတွက်အစာစားခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ရှာကြံသိပ္ပံပညာရှင်များအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ dopamine-receptor တွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြွက်စူပါလှုံ့ဆော်ဖို့အစားအစာ (ဖက်တီး cheesecake နှင့်ဝက်အူချောင်း) နို့တိုက်ကျွေးမှုအလျင်အမြန် D2 receptors တွေရဲ့အရေအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အဘယ်မှာရှိသနည်း အဆိုပါ striatum ၌တည်၏။ အဆိုပါကြွက်စူပါ yummy အစားအစာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုစားပြီးမှ, အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနိမ့်ကျန်ရစ် ကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ် (ထိုစမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်) ။
အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူသကဲ့သို့, striatum အဆိုပါ Over-ဆွဖို့တုံ့ပြန်ပေမယ့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ဆို, ကိုကင်းမှဓာတ်ပြုပြီးလမ်းမှဒါကိုပြု၏။ (အခြားပြောင်းလဲမှုများကိုဆက်လက်နိုင်ပေမယ့်) ကင်း၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှစ်ရက်အတွင်းပြန်ကောင်း။ ဒါပေမယ့်အစားအသောက်-တစ်ဦးနှင့်အတူ သဘာဝက အားဖြည့် (buzz) - D2 ကုန်ခမ်းသွားခြင်းသည်ဝေးကွာသည်။ ကိုကင်းသည် dopamine ပိုမိုပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုယူဆသောကြောင့်အစားအစာပြီးနောက်ကြာရှည်သည်မှာကြာသည်ကိုသိလိုသည်။ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအစီအစဉ်တစ်ခုစတင်နေပြီလား။
ပိုပြီးဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့တစ်ခုခုလည်းပေါ်မယ့်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူသကဲ့သို့, ကြွက်၏ဦးနှောက်မှတ်ပုံတင် ဒီထက်အပျော်အပါး activation ။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြွက်သားထုံးတမ်းစဉ်လာအရအပြုအမူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ စားသုံးမှုသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပုံမှန်ထက်နိမ့်ကျသည်။ ကြွက်များကစဉ်းစားနေပုံရသည်“ Cheesecake (သို့) ဘာမျှမက” (စိတ်ဝင်စားစရာမှာသကြားစားသုံးမှုမှထုတ်လုပ်သော opioids များသည်အက်စစ်ဖြစ်သည် အခြား Anti-မွတ်မပြေနိုင်သောယန္တရား oxytocin ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်။ )
သိသာထင်ရှားတဲ့အနေဖြင့်အပြုအမူတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုအားဖြည့်ပေးသောအခြေအနေများတွင် (မည်သည့်ယန္တရားများမှတစ်ဆင့်)“ အငွေ့ပျံစေသောအစပျိုးခြင်း” သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားသာချက်ဖြစ်သည်။ သာမန်မွတ်မပြေ၏အချက်အတိတ်။ hibernating မတိုင်မီမြင့်မားသောအဆီဆော်လမွန်အပေါ်ဝက်ဝံ gorging စဉ်းစားပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သတ်ဖြတ်မှုတစ်ခု၏ပေါင်နှစ်ဆယ်ခန့်ကိုသိုလှောင်ရန်လိုသည့်ဝံပုလွေများ။ သိုမဟုတ်ခဲယဉ်းသည့်ကာလများ၌ရှင်သန်ရန်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောကယ်လိုရီများကိုအပိုပေါင်အနည်းငယ်သိုလှောင်ရန်လိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကြက်ဆင်နှင့်အာလူးကြော်များထည့်ပြီးသည့်အခါသင်အကြိုက်ဆုံး Thanksgiving pie ပေါ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စရိုက်ဦးနှောက်အဖြစ်တစ်ခုခုရိပ် မိ. လိုက်တဲ့အခါ တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွှေအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချစေလိုသည်။ နွေးထွေးပြီးစိတ်ရှုပ်စေသောကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်အတူ၎င်းသည်မတတ်နိုင်ပါ။ Nope ။ ဒါဟာခံစားချက်တွေကိုဖန်တီးရမယ် မရှိခြင်း or မကျေနပ်မှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ကန့်သတ်အတိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ရန်အတွက် (မတရားသော) ။
receptors ပြောင်းလဲမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုခုဟုထင်မြင်စေသည်။ မမှန်ပါ။ ငါတို့ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေချင်တယ်။ အရာရာတိုင်းဟာငါတို့အတွက်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူး သာမန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကကျွန်တော်တို့ကို super-goodies တွေပဲအာရုံစိုက်စေချင်လို့ပါ။ ပုံမှန် dopamine ပမာဏသည်မလုံလောက်ပါ။ ကျနော်တို့တောင်းဆိုမှုများဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုခု, "မြင့်မားသောတန်ဖိုးကို" (အဖြစ်ဖြစ်စေမ) အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခု, ငါတို့ ဦး နှောက်သည်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည် dopamine (နှင့်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု) ကိုလွှတ်ပေးရန်လိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခုချင်တယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အရာထက်ပိုကောင်းသည့်အချိန်တွင် Dopamine ထုတ်လွှတ်သည်။ ထပ်မံ၍ မကျေနပ်မှုမခံစားရမီ dopamine တိုးပွားလာခြင်းက striatum ရှိကျန်ရှိနေသေးသော receptors အနည်းငယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။
ဆုရတိုက်နယ်၏အလုပ်သည်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင်ပင်မကျေနပ်မှုအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားအလာရှိသောအခွင့်အလမ်းများကိုရယူရန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ရွေးချယ်မှုများကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်အောင်မြင်မှု၊ အောင်မြင်သောပိုးပန်းမှုသို့မဟုတ်ငွေစုဆောင်းမှုများကိုရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းကိုအားရကျေနပ်စွာဖြင့်မျှော်လင့်စောင့်စားနေသည်။
သာမာန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ကပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်ဘဝနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်စေသည်။ ငါတို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်ကိုအလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းတို့ဖြစ်သည့်အခါပုံမှန်အပျော်အပါးများနှင့်အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောအစီအစဉ်များသည်ပုံမှန်အတိုင်းရှုပ်ထွေးမှုကိုမပေးနိုင်ပါ။ ပိုဆိုးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးနွယ်စု၊ စုံတွဲတွဲလောင်းမျောက်ဝံများသည်သာယာဝပြောမှုအတွက်လိုအပ်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့မှုနှင့်နွေးထွေးသောချစ်ခင်မှုကိုတန်ဖိုးထားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ပင်မကျေနပ်မှုများခံစားရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပုံကြီးချဲ့ထားသည့်လိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်အမှားမည်မျှရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ပန်းတိုင်များကိုခြိမ်းခြောက်နေလျှင်ပင်ချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုလိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုအောင်မြင်စွာပြန်ပေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်.
စူပါဆွအမေရိကန်များ၏ 65% အဝလွန်ဖြစ်ကြပြီးကွန်ပျူတာများနှင့်အတူယောက်ျားနေရာတိုင်းတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း riveting ရှာတွေ့သောအချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်အောင်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအကူအညီနဲ့သောလူသားမြားပွောငျးလဲဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုတတျနိုငျသ? ကျနော်တို့အနိမ့် D2 receptors နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်အဘို့အမှန်တကယ်ထူးခြားသောဆွပါပြီမယ်လို့ဘယ်သို့သောအားဖြင့်စေသောအခြားဆက်စပ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖွငျ့ဝိုငျးတွန်းခံရပါသလား?
Sarey သည်မိမိ၏ harem ကိုတရားစီရင်ရန်အခွင့်အရေးယူသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဂီတပညာရှင်ဂျွန်မေယာကသူအခုဝန်ခံခဲ့တယ် porn ၏နာရီကိုပိုမိုနှစ်သက် အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်ဆံရေးမှ။ (ထိုအဟုတ်, မိန်းမများလည်း "cheesecake" တွင်မူးရူး။ ကြည့်ရှုပါ (အဆိုတော်) 'Katy Perry သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အလုပ်လုပ်သည်။')
တစ်ဦးက gadfly ဦးနှောက် signal ကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးကြီးအစားအစာသို့မဟုတ်အလွန့်အလွန်လှုံ့ဆော်ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ရရှိနိုင်ပါတဲ့အန္တရာယ်များတာဝန်ယူမှုဖြစ်လာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများပေးဝေ။ အဆိုပါမူးရူးခလုတ် activated နေဆဲအခါ, ငါတို့ဘယ်လောက်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ပဲနေပါစေစိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ကိုချန်လှပ်။ ထူးဆန်းတာကတစ်ယောက်ယောက်ကပိုပူလာအောင်၊ ပိုပူလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရင်၊ သူကပိုပြီးပျော်ဖို့ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ နည်းသော။ နစ်မြုပ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်လေထဲတွင်အသက်ရှူသောကြောင့်သူ၏အောက်စီဂျင်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလားတူစွာထုံနေသော ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်မခံစားနိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်သူ၌မရှိသောအရာသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေသည်။ အပျော်အပါးကိုရှာဖွေရန်အပူရှိန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားရကျိုးနပ်သော်လည်း၎င်းသည်ပျော်စရာအတွက်အလွယ်တကူမှားယွင်းနိုင်သည် ကတိ အပျော်အပါး၏။
လေ့လာမှုတွင်ပါရှိသောကြွက်များသည်အကန့်အသတ်မဲ့သာလွန်သည့်ပမာဏကိုကမ်းလှမ်းသောအခါအဝလွန်လာသည်။ ပုံမှန်ကြွက်များနှင့်မတူဘဲလျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့်ခြိမ်းခြောက်ခံရလျှင်တောင်မှသူတို့ရဲ့အရသာကိုတော့မချွတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့သည်မကျန်းမာသောအစွန်းများကိုစားသုံးကြသည်။ သူတို့မကျေနပ်ခဲ့ကြ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကိုစဉ်းစားပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုပေးသော“ အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်များ” ကိုကလစ်တစ်ချက်စီနှိပ် မိ၍ အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သည့်အခါတွင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းမှုကိုတွန်းလှန်နိုင်သလား။ Sooty သည်မိန်းမများနှင့်ပြည့်နေသောလှောင်အိမ်နှင့်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်အလွန်လိုအပ်သောအနားယူခြင်းကိုရရှိခဲ့သည် ဘယ်တော့မှ ပြီးပြီ အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်နောက်ထပ်တကယ့်“ အိမ်ထောင်ဖက်” ညည်းတွားသံများအမြဲရှိသည်။ Goodies များပြားလာတဲ့အခါ ဦး နှောက်ကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးဆောင်မှုနှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။
အော်ဂဇင်ကအပြည့်အဝသက်သာအောင်မလုပ်နိုင်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Bond အပြုအမူတွေ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ တစ်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲလိင်), ငါတို့မကြာမီနောက်မှမကျေနပ်မှုခံစားအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ သို့ဆိုလျှင်ဤချိုင့်ဝှမ်းသည်စစ်မှန်သော libido သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရစေသည့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဒြပ်မဲ့အရသာမခံနိုင်မှုလား။
အော်ဂဇင်တစ်ခုပင်လျှင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုတိုးပွားစေနိုင်သလား။ ဘယ်သူမှသေချာမသိဘူး သို့သော်ကြွက်၏ dopamine receptor သိပ်သည်းမှုသည်၎င်း၏ပထမကောင်းကင်ဖွားအစာကိုကူညီပေးခြင်းဖြင့်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ မိတ်လိုက်စားခြင်းနှင့်စားခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသောမူးယစ်ဆေးခလုတ်တွင်ထပ်နေသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်လာသည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်စွန့်ပစ်အစားအစာများစားသုံးခြင်းသည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကာလအတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေသည်။ ပြီးတော့ညနက်သန်းခေါင်မှာပီဇာဖြစ်သွားတဲ့အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးအကြောင်းဒီလူကြိုက်များတဲ့ဟာသကိုသင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။
အော်ဂဇင်နှင့်အစာစားခြင်း၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒကို D2-receptor အပြောင်းအလဲများသို့မလျှော့ချနိုင်ပါ။ သို့သော်၊ receptor အပြောင်းအလဲများသည်အမြဲတမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိဘဲလိင်ဆန္ဒကိုတခါတရံအဘယ်ကြောင့်မြင့်တက်ရခြင်း၏ပဟေofိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ (တစ် ဦး ရှိနေဆဲဟု၏အယူအဆပါ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်သံသရာ သင်သုတေသနပြုလေ့လာသင်ယူရန်သင့်အားအသစ်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်ပြီးသားကိုအနည်းဆုံးတစ်သံသရာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး အမျိုးသားများတွင်။ )
သုတေသနတစ်ခုသည်လိင်မှုကိစ္စအမျိုးမျိုးပြီးနောက် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု၏လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှာဖွေခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အရက်သောက်ခြင်း၏ကရုဏာတစ်ခုတည်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့ခံရမည်မဟုတ်ပါ။
2019 - ကြွက်များတွင်တစ်ဦးက high-အဆီဓာတ်စာအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ '' ဘရိတ် '' လျှော့ချ
2016 - သုတေသီများမတရားသောအနေဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှုခွဲခြားသောဦးနှောက်ထဲမှာယန္တရားသော့ဖွင့်
2015 - Dopamine ဒီရေသင့်ကျော်ရှင်းပြပါစေသော: အင်ဆူလင်သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာဆုကြေးနေရင်မြန်အောင် Activate လုပ်ဖို့ပြသည်
၂၀၁၀ - ကမ္ဘာ့အဆီလျှံသောနိုင်ငံများစာရင်း
ရှင်းပြခဲ့သည်သုတေသီ Paul Kenny, ဦး နှောက်သည်ဒိန်ချဉ်ကိုစားခြင်း၊ ချိစ်ကိတ်မုန့်စားခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ သို့သော်အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်မှုသည် D2 receptor ကိုအလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်များလမ်းကြောင်းကိုပျက်စီးစေသည်။ အညစ်အကြေးများကိုစွဲလမ်းစေသောကြွက်များအတွက်၊ သူတို့၏အပျော်အပါးစင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအဆီပိုများသောကယ်လိုရီများသောအစားအစာများကိုစားခြင်းဖြစ်သည်။ "သူတို့ဟာဆုလာဘ်တွေကိုသူတို့လုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး" ဟု Kenny ကပြောကြားခဲ့သည်။
အသစ်: ဘာကြောင့်အစာစားရတာအရမ်းခက်တယ် (Tufts ၏သုတေသနမှတွေ့ရှိချက်အရ“ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်သောတိရိစ္ဆာန်များသည် ဦး နှောက်တွင်တူညီသောလိုငွေပြမှုရှိသည်။
ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက်မှီငြမ်းထားမှုများမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမတရားသောနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအခြေခံ
အဆိုပါ Bing-အစပျိုး Concept ကိုဖော်ပြသုတေသန
ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် Crips & Fries ကိုအလွန်တောင့်တရတာလဲလေ့လာမှု